ကိုဗစ် – ၁၉ ရောဂါ အတွက် ခုခံအားစစ်ဆေးမှုကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် စတင်ကာ . . . – Shwe Ba
Homepage / Local News / ကိုဗစ် - ၁၉ ရောဂါ အတွက် ခုခံအားစစ်ဆေးမှုကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် စတင်ကာ . . .
ကိုဗစ် – ၁၉ ရော ဂါ အတွက် ခုခံအား စစ်ဆေးတာ ကို ဒီတပတ်ထဲမှာ စတင်တော့ မယ်လို့ ဆေး ပညာရှင် တစ် ယောက်ဖြစ် တဲ့ ရန်ကုန် ဆေး တက္ကသိုလ် (၁) ဆေးပညာဌာန ရဲ့ ပါမောက္ခဌာနမှူး ဒေါက် တာ ဇော်လင်းအောင် က ပြော ပါ တယ် ။
ကိုဗစ် – ၁၉ ရောဂါ နဲ့ ပတ် သက် တဲ့ အ မေး အ ဖြေ ကဏ္ဍမှာ ပြော တာဖြစ် ပြီး အ ခု မြန်မာပြည် မှာ ခိုင်မာ တိကျမှု ရှိတဲ့ (Antibody Test) စက်တွေ ကို တင် သွင်းလာပြီး ဒီတပတ် ထဲမှာပဲ စတင် စစ် မှာဖြစ်တယ် လို့ ပြောပါ တယ်။
“ဒီလိုစစ် တော့ ဘာထူးမှာ လဲလို့ ဆိုရရင် ရောဂါ ကို စတင်ပြီး ထိတွေ့တဲ့သူက ၂ ပတ်၊ ၁၄ ရက် အလွန်ကျရင် သူ့ရဲ့ သွေးထဲမှာ ခုခံအားဆိုတဲ့ ပဋိပစ္စည်းတခု ပေါ်လာ ပါတယ်။ ဒီ ပဋိပစ္စည်းကို တိုင်းတာကြမယ် ။ ဒါကြောင့် စတင်တဲ့ ပထမအဆင့်အနေနဲ့ ဒီရောဂါတွေကို ပြုစုစောင့် ရှောက်နေ ရတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ကိုယ် ခံအားပဋိပစ္စည်း ဘယ်လောက်ပေါ်လဲဆို တာ ကျနော် တို့ စတင်ပြီး စမ်းသပ်ပါ တယ်။ စမ်းသပ် တဲ့ အခါမှာ လည်း တကြိမ် တည်း စမ်းသပ် လို့ မသေချာရင် နှစ်ကြိမ် စမ်းသပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စမ်းသပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ခံ အားတွေ ပေါ်နေပြီဆို ရင်ဖြင့် ရောဂါကို ထိတွေ့ပြီးသားဖြစ်တယ်။ ရောဂါပိုး ဝင်ရောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ လက္ခဏာပြတယ်။ တစ်ခါ တစ် ရံ လက္ခ ဏာ မပြဘူး။ အဲဒီလို မျိုး သတ်မှတ် လို့ ရပါတယ်” လို့ ဒေါက် တာ ဇော်လင်းအောင်က ပြောပါတယ်။
ဈေးကွက် ထဲမှာလည်း စီးပွားရေးအရ ရောင်းနေ တဲ့ စက် တွေရှိ နေ ပေမယ့် ခိုင်မာတိကျတာ မရှိရင် ကောက်ချက်မှားသွားနိုင်တယ်လို့ ပြော ပါ တယ် ။
“ ဒီမှာ လည်း လူအများစု ကို စစ်လိုက် ပြီး ဥပမာအားဖြင့် တနိုင်ငံလုံးရဲ့ ၆၀/ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း သည် အဲဒီပဋိ ပစ္စည်း တွေ ပေါ် နေရင် တော့ ဝမ်းသာ စရာ ကောင်းပါတယ်။ ဒါကို Herd Immunity (လူအများစုမှာ ကိုယ်ခံအားရှိနေခြင်း) လို့ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒါသည် ကူးစက်ခြင်းကြောင့် ရနိုင် သလို ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းနဲ့လည်း ရနိုင်ပါတယ်။
ဒါ ကြောင့် အဲဒါတွေ ကို မျှော်လင့် နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် မို့လို့ ဒီစစ်ဆေးတဲ့ Test တွေပေါ့လေ။ Antibody Test လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ စတင်တော့ မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုမျိုး ခိုင်မာမှု သေချာတဲ့စက်တွေလည်း အခုရရှိနေပါပြီ။ စစ်ပြီးတဲ့အခါမှာ အဲဒီကနေအခြေခံပြီး Strategy (ဗျူဟာ) တွေ၊ နည်းဗျူဟာ တွေ ကို ဘယ်လိုပြုလုပ်ကြမလဲ။ ဘယ်လိုရှေ့ဆက်လျှောက်ကြမလဲ ဆိုတဲ့ Idea (စိတ်ကူး) တွေလည်း ရမှာ ဖြစ် ပါ တယ် ” လို့ လည်း ဆို ပါ တယ် ။
ဒီအဖြေ ပေါ်မူတည် ပြီး ကျန်းမာရေး နဲ့ အားကစား ဝန်ကြီးဌာန က ဆုံးဖြတ် ချက် ချ တာ ၊ ရှေ့ဆက် သွားရ မယ့် လမ်းစဉ်တွေကို အကောင် အထည်ဖော်မှာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
Previous post မြန်မာ့ ရုပ် ရှင် နှစ် (၁၀၀) ပြည့် မှာ အကယ်ဒမီ ဝတ်မှုံရွှေရည် တောင်းဆုပြုလာတဲ့ ရင်ထဲက ဆန္ဒ လေးတစ်ခု
Next post အားလုံးရဲ့ တကယ့် ဘုံရန်သူက ဘယ်သူလဲ ?